फेरि ध्यान भरतपुरतिर, कहिले होला मतदान? | Suvadin !
आयोग भन्छ–सर्वाेच्चको फैसला अध्ययन गरेर मात्र निर्णय लिन्छाैं
अब भरतपुर–१९ मा फेरि मतदान कहिले होला? निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्मा ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसला अध्ययन गरेर मात्र थाहा हुने बताउछन्। ‘अहिले नै भन्न सकिदैन। आयोगले फैसला अध्ययन गरेपछि मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउछ,’ शुभदिनसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘अध्ययन गरेपछि आयोग आफै या मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय भरतपुरले मतदानको मिति तोक्छ।’
Jul 31, 2017 10:48
भरतपुर महानगरमा मेयरका उम्मेदवार क्रमश: एमालेबाट देविप्रसाद ज्ञवाली र माअाेवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल।
काठमाडाैं, साउन १६–स्थानीय तहको निर्वाचनको क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चामा रह्यो भरतपुर। वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले भरतपुरमा तालमेल गरेर रेणु दाहाललाई मेयरको उम्मेदवार बनाए भने एमाले एक्लै भिड्यो। उसले देविप्रसाद ज्ञवालीलाई उम्मेदवार बनायो।
मुख्य दलहरुले राजधानी रहेको काठमाडौं महानगर भन्दा भन्दा भरतपुरलाई महत्वमा राखे। कारण भरतपुरमा तालमेल मात्र होइन् रेणु माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुत्री पनि हुन्। र, एमालेको ध्यान पनि भरतपुरमै रह्यो।
तर, वडा नम्बर १९ को मतगणनाको क्रममा जेठ १५ गते राति ९० मतपत्र च्यातिएपछि फेरि चर्चामा आयो भरतपुर। जेठ २० गते निर्वाचन आयोगले वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको निर्णय गर्यो। तर, जेठ २१ गते त्यसविरुद्ध एमालेबाट वडा नम्बर १९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि त्यसबारे करिव दुई महिनासम्म निर्णय हुन सकेन्।
सोमबार सर्वाेच्च अदालतले भरतपुर–१९मा पुनः मतदानको फैसला सुनाएपछि सबैको ध्यान भरतपुरतर्फ केन्द्रित भएको छ।
प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न भएर जनप्रतिनिधिले काम थालिसकेका छन्। प्रदेश नम्बर २ मा असोज २ गतेका लागि निर्वाचनको मिति तोकिएको छ।
भरतपुर–१९ मा तीन वटा मतदान केन्द्रमा तीन हजार आठ सय दुई मतदाता रहेका रहेका छन्। अब ती तीनवैट मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ। किरण मावि किरणगञ्ज, जीवनज्योति राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालय पूर्वगुञ्जनगर र शारदा मावि शारदानगरबजार मतदान केन्द्र हुन्।
वैशाख ३१ गते भएको निर्वाचनमा वडा नम्बर १९ मा दुई हजार आठ सय ६० मत खसेको थियो।